Cuntooyinka ku socda wheels waxaa lagu soo bandhigaa Bini'aadamka Minneapolis - Cuntooyinka ku socda wheels
Cuntooyinka Lugaha Laydhka waxaa lagu soo bandhigaa Aadanaha Minneapolis
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in dad yar oo ka tirsan Cunnada Qoysaska Reerka loo soo bandhigi doono sida Bani-aadamka Minneapolis maalmaha soo socda!
Stephanie Glaros, oo ah abuuraha mashruuca "Aadanaha Minneapolis", ayaa diiradda saaraya sameynta isku xirnaanta dadka. Waxay u shaqeysaa inay dhiirrigeliso naxariista oo ay naga dhigto inaan aqoonsanno waxyaabaha aan wadaagaan, gaar ahaan kuwa aan caadi ahaan u aragno inay naga duwan yihiin.
Stephanie waxay nagala shaqeyneysaa inay nala wadaagto sheekada Cuntada Lugaha Gawaarida qaab cusub. Waxay soo dhejineysaa sawirro iyo sheeko la socota sideed qof oo ku lug leh Cunnooyinka Gawaarida ee Disembar. Waxaad la kulmi kartaa sideeddan aadanaha, oo dhammaantood leh sheekooyin aad u qaas ah, adigoo raacaya Bini aadamka Minneapolis on Facebook ama Bini'aadamka degelka Minneapolis.
Stephanie waxay biloowday sawir qaadista iyo wareysiga dadka ku dhaqan wadooyinka magaalada Minneapolis sanadkii 2010, halkaas oo hadafkeedu ahaa inay jabiso caqabadaha iyo inay barato sheekooyinka dadka dhabta ah. Sannadkii 2013 tani waxay isu rogtay barteeda, Bani'aadamnimada Minneapolis, oo ku saleysan barta caanka ah ee "Aadanaha reer New York".
Intii ay ku jirtay khibradeeda wareysiga iyo barashada dadka Cuntada Lugaha, waxay leedahay tan inay dhahdo: “Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah oo ku saabsan sheekooyinka ku saabsan Cunnooyinka Wheels ee aysan dadku ka warqabin. Waxaa jira noocyo badan oo sababo ah oo aad ugu baahan karto caawimaad waqti ka waqti ah. Waxay noqon kartaa xaalad ku meelgaar ah, ama waxay noqon kartaa wax joogto ah. Rajadaydu waxay tahay in dadku ogaadaan in Cuntada Lugaha Laydhka laga yaabo inay dadka uga faaiido badan tahay inta ay iyagu ogaanayaan. ”
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad wadaagto sawirrada iyo sheekooyinka lagu dhejiyay Bini aadamka reer Minneapolis, si dad badani u arki karaan shaqada cajiibka ah ee ay qabanayso Stephanie waxna uga baran karto wax badan oo ku saabsan Cuntooyinka Wheels-ka marka hawsha socoto!
Diisambar 12, 2016